Luzovula amehlo kwabaningi uhlelo oluthi
KULINDELEKE ukuthi ludonse amehlo uhlelo oluthi Makoti-Are you the One? noluzoqala kwi-1Magic ngenyanga ezayo Isithombe: SITHUNYELWE
ABESIFAZABE abakhetha ukuyohlala nabayeni babo uma beqedwa ukulotsholwa, bazokhuluma ngohambo lwabo lokuhlala nemindeni emisha ohlelweni oluthi Makoti- Are you the One?
Lolu hlelo luzoqala kwi-1Magic, ngoJanuwari 7, ngo-8.30, ebusuku.
Kulona kuzobonakala abesifazane abaqhamuka ezinhlangeni ezihlukene nabazohlala izinsuku ezingu-21, nabasemzini ukubona ukuthi ngempela bakulungele yini ukugana?
UShirley Adonisi osanda kuqokwa njengomqondisi wezinhlelo zakuleli kwaM-Net, uveze ukuthi abahlose ukukuveza kulolu hlelo ukuthi ingabe abesifazane bakulungele yini uyohlala nabasemzini uma sebeqediwe ukulotsholwa?
“Uma abesifazane beqedwa kulotsholwa, abanye bayahamba beyohlala nabantu basemzini ukuze bafunde ukuthi bangabantu abanjani futhi baqale bazijwayeze impilo nabo.
“Konke lokhu bakwenza ngenjongo yokuthi bathole izibusiso kubona zokuthi bangabantu abakulungele ukuba ngomakoti. Yingakho ke sikhethe ukuba nalolu hlelo ukuze kube khona izinto esibalekelela ngazo ngaphambi kokuthi bathathe lesi sinqumo,” kusho uShirley.
Uveze ukuthi abazokwenza ohlelweni ukugqamisa isiko elaziwa ngokukotiza, nabasiza ngalo abazoshada ukuthi lokhu abakwenzayo bakulungele noma benza iphutha elikhulu.
“Amasiko, inkolo nezinye izinto ezihlukene, yizona kakhulu ezike zifike zimise injabulo emishadweni yabantu. Yikhona konke lokhu esizobheka ukuthi akudali yini uqhekeko phakathi kukamakoti nabasemzini?
“Laba besifazane bazobonakala beya emzini nala bezohlala khona benze izinto ezihlukene ukubona ukuthi bazokwazi yini ukuzimela nomndeni kamkhwenyana, babone ukuthi ngabe bakulungele yini ukuba yingxenye yabo,” kuchaza uShirley.
Uthe ekupheleni kwesizini, izithandani zizokhetha ukuthi ziyaqhubeka namalungiselelo noma sekuwukuphela kwento ekade ibahlanganisile.
“Umamezala uzobeka olwakhe uvo ukuthi ngabe umakoti ukulungele yini ukuba yingxenye yomndeni? Ngisho engavumi noma evuma kodwa umuntu esimbheke kakhulu ekutheni athathe isinqumo undodana oyobe esemshada. Nomakoti nabo bazonikwa ithuba lokuthi bazithathele isinqumo sokuthi bayaqhubeka noma cha.
“Lezi izinhlelo esihlose ngaso ukuthuthukisa ezakuleli kulesi siteshi. Kuyasijabulisa futhi ukuqala ngohlelo esazi kahle ukuthi abantu luzobakhulumisa,” kuchaza yena.